Shabakadda Wararka Amiirnuur – Page 121 – Xog Xaqiiqda Ku Saleysan
Sheykh Dr Ayman Al-Dawaahiri oo ka tacsiyeeyay Istish-haadkii Sheykh Abuu Zubeyr.
Farriin maqal ah oo horudhac u aheyd silsiladda loogu magac daray “Gu’ga Islaamka” ee qeybtii ugu horrerysay oo maanta ay baahisay Mu’assasada As-saxaab ayaa markii ugu horreysay Sheykh Dr Ayman Al-Dawaahiri -Allah dhowree- wuxuu Umadda Islaamka kaga tacsiyeeyay Istish-haadkii Sheykh Mukhtaar Abuu Zubeyr Amiirkii hore ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Warixin […]
Garoonka Meliteriga ee Abuu Duhuur oo si buuxda loola wareegay.
Mujaahidiinta Jabhatu Nusrah oo kaashanaha xoogagga Jeyshul Fatxi ayaa maanta si buuxda ula wareegay Garoonka Meliteri ee lagu magacaabo Abuu Duhuur ee kuyaalla gobolka Idlib ee Waqooyiga dalka Suuriya. Wariyeyaal ku sugan Gobolka Idlib ayaa sheegay inay Mujaahidiinta Saakay waabarigii ay jiireen difaacyadii ugu dambeeyay ee Ciidamada Nidaamka Bashaar Al-Asad […]
Dowlado ka tirsan Midowga Yurub ayaa si cad u sheegay inaysan dooneyn qaabiladda qaxootiga heysta Diinta Islaamka, xilli ay sii xoogeysanayaan mowjadaha soo galootiga ee kusii qul qulaya wadamadaasi. Maamulayaasha Jaziiradda Qubrus ayaa xusay inay diyaar u yihiin qaabiladda 300 oo ka tirsan qaxootiga kasoo cararay dagaallada ka socda bariga […]
Jabhatu Nusrah oo la wareegtay inta badan Garoonka Abuu Duhuur ee Gobolka Idlib.
Mujaahidiinta Jabhatu Nusrah ayaa la wareegay inta ugu badan Garoonka Meliteirga Abuu Duhuur ee kuyaalla Gobolka Idlib ee waqooyi galbeedka dalka Suuriya, kadib dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhacay. Wariyeyaal ku sugan Gobolka Idlib oo soo xiganaya ilo ku dhow dhow Mujahidiinta Jabhatu Nurah ayaa sheegay in […]
XSHM oo xaqiijisay inay gacanta ku heyso Maxaabiis Amisom ka tirsan.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa markii ugu horreysay xaqiijisay inay gacanta ku heyso Askar Maxaabiis ah oo ka tirsan Ciidamada Shisheeye ee isku magacaabay Amisom. War murtiyeed kasoo baxay Taliska Meliteriga Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in Mujaahidiintu ay gacanta ku hayaan Askar u dhalatay dalka Uganda, kuwaas oo lagu […]
Allah fadligiisa, waxaa noo suura gashay inaan markale hawada dib ugu soo laabano; kadib in muddo ah oo webku u xirnaa cillado xagga farsamada ah aawgeed. Sidii aad horey noogu barateen, waxay Shabakaddu dib u billaabi doontaa Wararkii gudaha iyo dibadda ee maalinlaha ahaa, annagoo si gaar ah diirada u […]
DAAWO : Gumaadkii Amisom loogu geystay Deegaanka Jannaale.
September 8, 2015 by admin 3 comments
Warbaahinta rasmiga ah ee ku hadasha afka xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa baahisay sawirradii ugu horreeyay ee muujinaya dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose. Page-ka Facebook-ga idaacadda Islaamiga Andalus ayaa baahiyay sawirrada waxaana kasoo muuqaanayay ciidamada mujaahidiinta oo xoog ku gelaya saldhigga ciidamada Uganda […]
Kuntu-Waarey : Mujaahidiinta oo la wareegay kadib ka bixitaankii Ciidamada Shisheeye.
Shacabka ku dhaqan deegaanno iyo degmooyin katirsan gobolka shabeelaha Hoose oo laga xureeyay ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa dhigay iskusoo baxyo ballaaran oo ay kusoo dhaweynayaan guulaha ay mujaahidiintu soo hooyeen. Ciidamada shabaabul Mujaahidiin ayaa iyana isku fidiyay deegaanno hor leh oo katirsan gobolka shabeelaha Hoose kadib markii ay isaga baxeen […]
Qarax Lagula Eegtay Itoobiyaanka Degmada Halgan Iyo Sarkaal Lagu Dilay Mugdisho.
Wararka ka imaanaya magaalada Mugdisho ayaa sheegaya in xoogag hubaysan ay dileen sarkaal katirsan dawlada Fadaraalka. Ciise Macalin Yaasir ayaa lagu dilay degmada Dharkeynley ee gobolka Banaadir wuxuuna ahaa madaxa danbi baarista ee degmadaas. Goob joogayaal ayaa sheegaya in rag bistooladu ku hubaysan ay togteen sarkaalkaas ayna si nabad ah […]
Ciidamada Mujaahidiinta Alshabaab Oo Lawareegay Degmada Janaale.
Kadib camaliyad istish-haadi ahayd iyo dagaal saacado qaatay ayay ciidamada mujaahidiinta Xarakada Alshabaab lawareegeen gacan ku haynta degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka ka imaanaya degmadaas ayaa sheegaya in camaliyad istish-haadi ah lala beegsaday saldhiga ugu wayn ee ciidamada shisheeye kuleeyihiin Janaale kadibna uu dhacay dagaal xoogan oo […]